Tapaka ny lohany sy ny foto-peny, raha ny fahitana azy vonjimaika. Isan’andro dia misy haterina hatrany ao amin’ny tranom-patin’ny HJRA vokatry ny fandehanana moto. Hatreto dia tsy mbola misy fepetra firy noraisina mihitsy ankoatry na fanovàna lalàna momba ireny fa toa havela ho faty fotsiny ny mpampiasa moto. Endrika iray izay midika izany fa mbola ho ela vao voafehin’ny mpitondra ny lafiny fifamoivoizana sy fiarovana ny ain’ny mpampiasa làlana. Ny tsirairay ihany koa anefa dia tompon’andraikitra amin’ny tenany.